Indlu yobuGcisa yamandulo yoMqokeleli* iYueXue Park*Indlela engaphantsi - I-Airbnb
Indlu yobuGcisa yamandulo yoMqokeleli* iYueXue Park*Indlela engaphantsi
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguFengyi
Le yindlu yobugcisa eyakhiwe ngumqokeleli wezinto zakudala ophambeneyo. Uyilo ludibanisa isitayela esidala saseGuangzhou kunye nesitayela saseShanghai. Ekubeni umnini yintsapho yengqokelela yefenitshala kwi-Ming kunye ne-Qing Dynasties, ifenitshala esetyenziswa endlwini bubuncwane bonke: i-huanghuali ibhedi ye-opium, i-hardwood ye-antique cabinet, i-Ming-style enkulu yendlu yesitulo sengalo yesihlangu ... kukho iifestile ezintle zeglasi. , iiwotshi ezintle zamaJamani zakudala. Unethemba lokwabelana ngovuyo lweengqokelela zobugcisa kunye nendlu yakhe yobugcisa.
Le ndlu imi kwintendelezo encinci ezolileyo ecaleni kweNtaba yaseYuexiu. Ujikelezwe yimithi eluhlaza, unokuphulaphula iintaka kusasa kunye namasele ngokuhlwa. Ikumgangatho wokuqala, ene-attic, kunye negadi entle ngaphambili nangasemva. Indawo inegumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye namagumbi okulala amathathu. Amagumbi amabini okulala akumgangatho wokuqala kwaye anendlu yangasese eyahlukileyo. Elinye igumbi lokulala likwi-attic kwaye kukho indlu yangasese eyahlukileyo phantsi kwe-attic. Kukwakho nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nomatshini wekofu olungele wena.
Indlu isembindini weGuangzhou. Kufuphi ekuphumeni kwesikhululo sikaloliwe saseYuexiu Park. Ukuchasana neMyuziyam yeKumkani yaseSouth Yue, exhaswa ngumfanekiso oqingqiweyo waseGuangzhou womfanekiso oqingqiweyo weWuyang, iMyuziyam yaseGuangzhou. Imizuzu elishumi uhamba ngeenyawo ukuya kwiHolo yeSikhumbuzo saseZhongshan, indawo yokumisa enye ukuya kwisikhululo sikaloliwe saseGuangzhou, izikhululo ezibini zikaloliwe eziphantsi komhlaba ukuya kwisitalato iBeijing Road Pedestrian. Ihotele yaseChina Grand, iDongfang Hotel, kunye nomboniso wezorhwebo wakudala ziyindawo nje yokulahla ilitye. Zininzi iindawo zokutyela ezikufutshane, kwaye kukho ezona zindlu zeti zindala kunye nezitrato zokutya phakathi kwamakhulu ambalwa eemitha. Kukho iBhanki yezoShishino kunye neyoRhwebo ecaleni kwayo, kwaye kukho iMcDonald's kunye neDecathlon kwelinye icala, elilunge kakhulu.
Umbuki zindwendwe ngu- Fengyi
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Guangzhou